50 Inowanzobatana Hurukuro Mibvunzo iwe unogona kutarisana neVabvunzurudzo | ITS
50 Inowanzobatana Nhaurirano Mibvunzo
Nezvekugadzirisa nzira yekubvunzurudza, kutsvakurudza uye urongwa hwekubvunzurudzwa kunogona kunge mutemo unosarudza matanho ako ekuita kuti uende kumutsara unotevera. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekugadzirira munhu anotarisira kushandira mushandi ndeyokuona maitiro ako kune mibvunzo yose yekubvunzurudzwa - kunyange iyo isina kunyanya kushamisa.
Kuti ikubatsire kutanga, ITS yakanatswa kuburikidza nenhamba yakawanda yekuongororwa kweongororo yekuwana mhedzisiro yemibvunzo yakawanda yevabvunzurudzo vanobvunzwa vanobvunzwa pakati pemibvunzo yekupedzisira. Nenzira iyi, pane mukana wekuti iwe unofanirwa kushanda mushandi-wakarongeka, hone pamberi girazi kana kuti kumbira shamwari kana hama yako kuti uite mhinduro dzako kune mibvunzo iripo kuitira kuti ugadzirire kuisa rutsoka rwako rwakanakisisa mberi.
Yakawanda Inowanzobvunzurudzwa Mibvunzo
Ndezvipi kukanganisa kwako?
Zvakarurama here kuti iwe uchafamba?
Sei uchida kushanda [kuisa sangano zita pano]?
Sei uchida kusiya sangano rako remazuva ano?
Sei kwaive nechirongwa mubasa rako pakati pe [insert date] uye [isa zuva]?
Chii chaungagona kupa kwatiri icho mumwe munhu asingagoni?
Unozviona kupi iwe mumakore mashanu? Makore gumi?
Ndezvipi zvinhu zvitatu mukuru wako wekare angada kuti iwe uwedzere?
Ichokwadi here kuti iwe uchafamba?
Ndidzidzisei maererano nenguva yawakaita mhosho.
Chii chinonzi fantasy yako inoshanda?
Ndiudzei pamusoro pekubudirira iwe unonakidzwa nazvo.
Ndeipi shamwari yako inoshungurudza?
Chii chaungatarisira kupedzisa mumazuva ekutanga 30 mazuva / 60 mazuva / 90 mazuva ari kushanda?
Taura nezvekudzoka kwako.
Taura nezvenheyo yako inodzidzisa.
Zviratidze iwe pachako.
Ndiratidzei kuti iwe wakatarisira sei mamiriro ezvinhu anotambudza.
Sei ichange iri pfungwa yakanaka kwatiri kuti tibvumirane newe?
Iwe unogona sei kubata mhepo yechinzvimbo ichi?
Iwe ungashanda zviitiko / kupera kwevhiki here?
Ndezvipi zvaunowana mubhadharo?
Sei uri kutsvaga rimwe basa?
Ipa nguva apo iwe wakaenda zvakanaka kupfuura izvo zvaidiwa kuti uite.
Ndezvipi zvingave zvako pakarepo mishumo inotaura pamusoro pako?
Chii chinokusvibisa iwe?
Chii chaunokwanisa kuwana?
Ndivanaani vapikisi vedu?
Ndezvipi zvawakakanganisika zvikuru?
Ndiudzei maererano nenguva iyo iwe haungagoni kubatsira kupesana nomutungamiriri wako.
Zita re CEO yedu chii?
Ndezvipi zvinangwa zvebasa rako?
Waizoita sei uremu?
Ndezvipi zvaiva nevadzidzisi vako / unhu hwavo?
Chii chinokusimudzira mangwanani?
Zvakachengeteka kutaura kuti uri piyona kana mutsigiri?
Chii chaiva bhuku rokupedzisira rawakashandisa pasina chikonzero chaicho?
Pachinhu ichi chakanaka kuti ndakadana mutariri wako panguva ino uye ndakamubvunza kuti chii chinzvimbo chaunokwanisa kuwedzera, angati chii?
Ndeipi nzvimbo yako yaunoda zvikuru?
Chii chinokuita kuti usakanganise?
Ndeapi mamwe masimba ako anosangana?
Iwe unogona sei kupisa mumwe munhu?
Ungashanda 40 maawa manomwe mazuva manomwe here?
Iwe ungagadzirisa sei munhu ane hasha kana ane hasha?
Iwe unofarira zvakanyanya uye zvishoma kudini nezvekushanda mune iyi indasitiri?
Ndeipi mibvunzo isina kukubvunza iwe?
Une mibvunzo ipi kwandiri?
Iyi mibvunzo inowanzobvunzwa munguva yekubvunzurudzwa kwaJobho, mibvunzo yakawanda isingatarisiri uye yakasiyana-siyana inogona kubvunzwawo.
Usakanganwa kupindura mumaketani kuti Ndeapi mamwe mibvunzo yakawanda iwe wawakabvunzwa munguva yekubvunzurudzwa?